Ny lahatsoratr'i John Hurley ao amin'ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i John Hurley
John dia manana 14 taona mahery amin'ny rindrambaiko amin'ny Internet sy ny traikefa amin'ny fitarihana. Talohan'ny nanombohany SmartFile, dia filoha ary mpiara-manorina ny Webexcellence i John, iray amin'ireo orinasam-pampandrosoana tranonkala lehibe indrindra any Indianapolis. John dia niara-niasa tamin'ny orinasa toa an'i Delco Remy, Angie's List ary NCAA mba hampiroboroboana rindranasa tranonkala manankarena. Nandritra ny fotoana niasany tao amin'ny Webexcellence, John dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny dingana fanombohana ExactTarget. Amin'ny maha filoha sy mpiara-manorina an'i SmartFile, John no mitarika ny varotra, ny marketing ary ny fampandrosoana ny orinasa.
Smartfile: Whitelabel ny vahaolana vahaolana amin'ny rakitrao
Zoma, Aprily 19, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 John Hurley
Na manomboka orinasa vaovao ianao, na mandefa vokatra vaovao, ny fanontaniana voalohany apetrakao dia ny hoe, "Iza no tsenako / mpanjifako"? Toa mora, sa tsy izany? Alohan'ny hahatongavako amin'ilay ampahany momba anay tsy nahavaly tsara an'io fanontaniana io dia avelao aho hanome anao ny fe-potoam-piasana fehezanteny roa: SmartFile (izany isika) dia orinasa fizarana rakitra natao ho an'ny orinasa. Manolotra orinasa amin'ny fomba azo antoka sy marika izahay handefasana sy handraisana rakitra. Rahoviana